आईपीएल खेल १७ : मुम्बई भर्सेज हैदरावाद
मुख्य पृष्ठक्रिकेट खेलकुद विदेशआईपीएल खेल १७ : मुम्बई भर्सेज हैदरावाद
विराटनगर, १८ असोज । आईपीएलको डबल–हेडरको दोस्रो दिन आज शारजाह क्रिकेट रंगशालामा दिउँसो ३ः४५ बजे भिड्दै हुनेछन् मुम्बई इन्डियन्स र सनराइजर्स हैदरावाद । चार खेल खेलिसकेका यी दुवै टोली पाँचौ खेलमा तेस्रो जित निकाल्ने दाउमा हुनेछन् ।
पराजित हुँदै प्रतियोगिताको सुरुवात गरेका यी दुवै टोलीको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ । आईपीएलको पहिलो खेलमा नै चेन्नईसँग पाँच विकेटले पराजित हुँदै प्रतियोगिता यात्रा सुरु गरेको मुम्बईले दोस्रो खेलमा कोलकताविरुद्ध ४९ रनको जित निकालेको थियो । तर निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको मुम्बई र बैंग्लोरबीचको तेस्रो खेलमा भने मुम्बईले सुपरओभरमा पराजय भोग्नु परेको थियो । प्रतियोगिताको चौथो खेलबाट भने मुम्बई आफ्नो ट्रयाकमा फर्किएको देखिन्छ । जितका लागि एक सय ९१ रनको विशाल चुनौती प्रस्तुत गरेको मुम्बईले पञ्जाबलाई ४८ रनको हार चखाएको छ ।
प्रतियोगिताको १७औं र आफ्नो पाँचौ खेलमा मुम्बई हैदरावादलाई रोक्दै अघि बढ्न चाहन्छ । तर लगातारको दुई हारपछि दुई जित निकालेको हैदरावादको चुनौती मुम्बईलाई त्यति सहज भने हुने छैन । पहिलो खेलमा बैंग्लोर र दोस्रो खेलमा कोलकतासँग पराजय भोगेको हैदरावादले तेस्रो खेलमा दिल्लीविरुद्ध १५ रनको जित दर्ता गरेको थियो । दिल्लीको विजयीयात्रालाई पूर्णविराम लगाइदिएको हैदरावादले आफ्नो चौथो खेलमा चेन्नईलाई सात रनले पाखा लगाएको थियो ।
प्रतियोगितामा गतिलो सुरुवात नगरे पनि अहिले निकै फर्ममा देखिएका यी दुई टोलीबीचको खेलमा को विजयी बन्ला ? आजको खेल जित्दै महत्वपूर्ण दुई अंक कसले हात पार्ला ? यी प्रश्नहरुको जवाफ हामी शारजाह क्रिकेट रंगशालामा हुने खेलपछि मात्रै थाहा पाउँछौं ।
आईपीएलमा हालसम्म यी दुई टोली १४ पटक आमनेसामने भइसकेका छन् । समान सात–सात पटक खेल आ–आफ्नो पक्षमा पारेको मुम्बई र हैदरावाद, दुवैलाई हेड–टु–हेडमा अग्रता लिने मौका छ । यी दुई टोलीबीचको पछिल्ला पाँच खेलको नतिजा विश्लेषण गर्ने हो भने मुम्बई माथि देखिन्छ । २०१७, २०१८ र २०१९ को आईपीएलमा यी दुईले एकअर्काविरुद्ध खेलेका पछिल्ला पाँच खेलमा मुम्बईले तीनपटक हैदरावादलाई हराएको छ । तर पाँचवटै खेलमा मुम्बईलाई निकै टक्कर दिएको हैदरावादलाई कमजोर आँक्न भने पटक्कै मिल्दैन ।
मुम्बई र हैदरावादका पछिल्ला सात खेल
हैदरावादले आईपीएलमा खेलेको पछिल्ला सात खेलको नतिजा हेर्ने हो भने उसले पाँचमा हार भोगेको छ भने दुई खेलमा मात्रै जित निकाल्न सफल भएको छ । तर मुम्बईको पछिल्ला सात खेलको नतिजा भने हैदरावादको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ । पछिल्ला सात खेलमा मुम्बई पाँच पटक विजयी भएको छ भने दुई खेलमा मात्रै पराजित भएको छ । स्मरण रहोस्, मुम्बई अघिल्लो संस्करणको विजेता हो भने हैदरावाद २०१६ को च्याम्पियन हो ।
शारजाह क्रिकेट रंगशालामा यी दुईले एकअर्काविरुद्ध खेल्न लागेको यो नै पहिलो पटक हो । तर मुम्बई र हैदरावादको शारजाहमा यो नै पहिलो खेल भने हैन । २०१४ आईपीएलमा दुई खेल खेलिसकेको हैदरावाद दुवै खेलमा पराजित भएको थियो । पञ्जाबसँग पहिलो खेल खेलेको हैदरावाद ७२ रनले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा चेन्नईसँग पाँच विकेटले स्तब्ध बनेको थियो ।
मुम्बईको पनि शारजाहमा प्रदर्शन राम्रो छैन । हालसम्म यस रंगशालामा एक खेल मात्रै खेलेको मुम्बई डेकनचार्जस्सँग ६ विकेटले पराजित भएको थियो ।